I-Diablo Immortal - Esikwaziyo Kuze kube manje mayelana ne-Diablo Mobile Game - Ukudlala
Idethi yokukhishwa kwe-Diablo Immortal
I-Diablo Immortal Trailer kanye ne-Gameplay
Njengengxenye yephrojekthi ye-Diablo Immortal, i-Blizzard izoletha uchungechunge lwegeyimu yokudlala indima edume kakhulu emhlabeni, i-Diablo, kumadivayisi eselula njengesihloko esingadlalwa mahhala.
Abalandeli ekuqaleni abazange bajabule ngesimemezelo se-Diablo Immortal, esenziwe emuva ngo-2018. Umbono wesipiliyoni seselula se-Diablo awuzange uhlale kahle kwabaningi babo. Ngokuhamba kwesikhathi nolwazi oluthe xaxa mayelana nomdlalo, kubonakala sengathi igagasi seliqala ukuphenduka, nokuhlolwa kwe-alpha okuthole ukusabela okuhle kwabezindaba kanye nabalandeli ngokufanayo - okuphakamisa ukuthi kungenzeka ukuthi i-Diablo Immortal iwumdlalo okufanele unakwe ngemuva kwakho konke. . Ngemuva kokuchitha isikhathi esifushane no-Diablo Immortal, sinethemba elikhulu mayelana namathemba esikhathi esizayo wegeyimu.
Kodwa-ke, ngenkathi ekuqaleni kwakubonakala sengathi i-Diablo Immortal izokhishwa kumadivayisi we-iOS ne-Android ngo-2021, iBlizzard yamemezela ngo-Agasti 2021 ukuthi igeyimu yeselula ye-Diablo izobambezeleka kuze kube ngu-2022 ukuze kuvunyelwe ukulungiswa okwengeziwe nokuthuthukiswa okufanele kwenziwe.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi asinalo usuku oluqinile lokukhululwa kwe-Diablo Immortal, sazi okuningi mayelana nokuthi yini ongayilindela kugeyimu yeselula ye-Diablo ezayo ngenxa yokuhlolwa kwe-alpha, ulwazi olwabiwe yi-Blizzard, kanye nolwazi lwethu lomuntu siqu ngegeyimu. . Unentshisekelo yokufunda okwengeziwe? Qhubeka ufunda ukuze uthole konke esikwaziyo njengamanje nge-Diablo Immortal.
Funda futhi: I-Zenith (VR) – I-VR MMO Engcono Kakhulu Etholakala Namuhla
UBlizzard uthe i-Diablo Immortal izodedelwa engxenyeni yokuqala ka-2022 Njengoba kunikezwe icala eliqhubekayo elibandakanya i-Activision Blizzard kanye nokutholwa kwenkampani okuhlongozwayo kweMicrosoft, akucaci ukuthi lokhu kuzoqhubeka nokuba njalo yini esikhathini esizayo esiseduze.
I-Blizzard ekuqaleni yayihlele ukuthi i-Diablo Immortal ikhishwe ngo-2021, kodwa inkampani yamemezela ngo-Agasti ukuthi i-ARPG izobambezeleka kuze kube unyaka ozayo ukuze inikeze ithimba lezokuthuthukiswa isikhathi esengeziwe sokushuna kahle izici eziyinhloko kanye nokuphela komdlalo.
Kuzodingeka silinde izimemezelo ezisemthethweni ezivela ku-Blizzard mayelana nedethi yokukhululwa enembe kakhudlwana, kodwa okwamanje, sazi kuphela ukuthi ukuhlolwa okwengeziwe kuhlelelwe kamuva kulo nyaka.
Funda futhi: Baldur's Gate 3(ukukhululwa okuphelele) - Konke Esikwaziyo Kuze kube manje
I-trailer ebuyekeziwe yokudlala kanye nentuthuko ye-Diablo Immortal ikhishwe ku-BlizzCon 2019, futhi ifaka phakathi amakilasi ezinhlamvu ezintsha, ukukhanda kwegeyimu, nezindawo ongazihlola. Bheka ividiyo engezansi:
Ngaphandle kweqiniso lokuthi igeyimu yeselula, kuzoba kakhulu i-Diablo efanayo osuvele ujwayelene nayo futhi oyijabulelayo, nakuba inezilawuli ezidizayinelwe ukwenza okuhle kwesikrini esithintwayo sefoni kunegundane noma isilawuli.
Umdlalo, othuthukiswa ngokubambisana phakathi kwe-Blizzard nabathuthukisi baseShayina kwa-NetEase (inkampani esabalalisa i-Overwatch, i-Diablo 3, ne-Warcraft e-China), uzokwenzeka eminyakeni emihlanu ngemva kwezehlakalo ze-Diablo 2, futhi uzohlola okwenzeka ngemva kwalokho. i-Worldstone yabhujiswa kulowo mdlalo, kanye nendlela eyaholela ezweni eliyincithakalo le-Diablo 3.
Inani labalingiswa abavela ku-Blizzard's Heroes of the Storm, okuhlanganisa u-Tyrael, uMalthael, noLeah no-Deckard Cain, bazovela endabeni, kanye nabazingeli bamademoni u-Valla noJosen, abavele kulowo mdlalo. Mayelana nezitha, abangani baka-Diablo u-Baal no-Skarn, i-Herald of Terror, kulindeleke ukuthi benze ukubonakala kwe-cameo. Izigqi zezindaba zizolethwa abalingisi abangadlaleki, nezindaba ezengeziwe ezifikayo ngenxa yezibuyekezo zegeyimu ezizayo.
I-Diablo Immortal, eyakhiwe kusukela phansi, izokwethula amakhono amasha namasu angakabonakali kumdlalo we-Diablo. Nakuba amakilasi ayisithupha ajwayelekile ezobe ekhona (I-Barbarian, Demon Hunter, Monk, Necromancer, Crusader, kanye ne-Wizard - kanti uDokotela onguMthakathi akekho ngokusobala ngalesi sikhathi), bazokwazi ukubambisana ngezindlela ezintsha ngokuphelele, ngokusho konjiniyela.
Funda futhi: I-Forza Motorsport - Esikwaziyo Kuze kube manje
Yilokho Konke Nge-Diablo Immortal. Hlala ubukele ukuthola izibuyekezo eziningi futhi ubeke uphawu kusayithi lethu ukuze uthole izindaba ezengeziwe. Ngiyabonga Ngokufunda!
Iyiphi IBachelor in Paradise Season 7 All About?
Kanjani U-Mariah Carey Uyizuze Kanjani Isamba Semali Engu-$600M?